ABAGCINI BEGALAXY 3 YENETFLIX ITYHILE UMHLA WEZINTO OMELE WAZI NGAPHAMBI KOKUBA UBUKELE IZIQWENGA EZITSHA ZEZIPHI IZINTO EZINQUNYULWE IINTLOKO ZASEZULWINI? - IIMUVI
Umboniso bhanyabhanya omangalisayo ohlekisa kangaka? Hayi, ayinakuba sisikhokelo. Banemiboniso bhanyabhanya emininzi ehlekisayo. Ummangaliso
Umboniso bhanyabhanya omangalisayo ohlekisa kangaka? Hayi, ayinakuba sisikhokelo. Banemiboniso bhanyabhanya emininzi ehlekisayo. Umboniso bhanyabhanya omangalisayo onomthi? Kwaye kulapho uthi, NdinguGroot.
Ewe injalo loo nto. Inqaku limalunga nelinye lawona malungelo aphambili eMarvel.
Yinto leyo abaninzi abangayilindelanga kumdlalo bhanyabhanya omangalisayo.
Kodwa ingcamango yamatye angapheliyo yaziswa kule filimu.
Kwakhona, khumbula umphathi wecandelo elidlulileyo, i-titan-Thanos.
Yintoni entle ngale franchise?
Ewe baqala ukubonakala kwi Abagcini befilimu yeGlass . Kwaye ngasekupheleni kwefilimu yokugqibela Umdlalo wokuGqibela, sibona uTor ejoyina i-Guardians yeqela le-Galaxy kwindawo yabo yasesikhepheni okanye bathi ngendlela echanekileyo- indawo yenqanawa ye-Starlord.
Oko kwakutolikwa kukhokelela kwiziganeko zencwadi ehlekisayo ebizwa ngokuba yiAsgardian yegalaxy. Uyabona into abayenzileyo apho. Akunjalo?
Kodwa ngoku masibe neendaba malunga nokukhutshwa kweGlassus yeGlass Volume 3. Ke, nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga noku. Qhubeka ufunda ukuze wazi konke malunga noku.
Iya kuba ngantoni le filimu?
Khumbula okwenzekileyo kumthamo wokugqibela we Guardians of the Galaxy. U-Ego Star utata wenkosi wamsa kwiplanethi yakhe. Kwaye kulapho batyhila ukuba inkosi yenkwenkwezi isezulwini.
Nangona kunjalo, abalandeli babone kancinci kwifilimu yokuqala.
Ekupheleni kwe-movie yokuqala, kuyacaca ukuba i-Starlord ingaliphatha njani amandla elitye elingapheliyo. Kulapho yatyhilwa khona ekuqaleni.
Kodwa u-Ego uthi amandla akhe asuka entliziyweni yeplanethi. Kwaye ngoku ukuba iplanethi itshatyalalisiwe kubonakala ngathi amandla akhe alahlekile kunye nezinto. Kodwa abalandeli banoluvo lokuba wayenamandla nangaphambi kokuba kubekho iplanethi. Mhlawumbi ubuyela ngaphakathi Iimuvi ezizayo . Ngubani owaziyo?
Ke, sinokwazi ukumba nzulu kwesi sihloko.
Iza kukhutshwa nini imovie?
Ufakelo lwesithathu lwe Imovie iphantse ibe yiminyaka emibini kude . Umboniso bhanyabhanya ubuya ngokuqinisekileyo, tho.
Umboniso bhanyabhanya ekuqaleni wawuza kuba ngumboniso bhanyabhanya wokuqala weSigaba sesine sebali elimangalisayo, kodwa ngako konke ukudubula nokuphinda uqeshe umbhali / umlawuli kaJames Gunn.
Kwaye ishawa ye-coronavirus, imovie yaqhubeka ukulibaziseka.
UKevin Feige uqinisekisile kwiComic-Con 2019 ukuba i-Guardians yeGalaxy 3 iya kwenzeka ngokuqinisekileyo. Ngapha koko, umhla awunguye umxholo wengxoxo.
Ndiyakuqinisekisa ukuba izicwangciso zexesha lokufota # GotGVol3 kwaye xa ikhutshwa azitshintshanga kwaphela kunyaka ophelileyo kunye nesiqingatha okanye njalo. Nawaphi na amarhe ongeyonyani abubuxoki, utshilo uJames Gunn ngo-Agasti 2020.
I-Disney ineentsuku ezimbalwa zokukhutshwa kwezinye zeemovie 'ezingenasihloko zeMarvel' yomhla ka-Okthobha 7, 2022, Februwari 17, 2023, Meyi 5, 2023, Julayi 28, 2023, okanye ngoNovemba 3, 2023.
I-movie yesithathu ye-franchise ifihle phantsi kweempumlo zethu.
Ukuqukumbela, imovie iza ngokuqinisekileyo kodwa ukudutyulwa kwe-movie akukho ndawo ikhoyo kwaye umhla wokukhutshwa ukude ngakumbi. Ke, abalandeli kuya kufuneka balinde kwaye babukele izinto eziza kugcinwa ziimovie zeMarvel kubo.
Imuvi entsha kaJohn krasinski
Iidemon zikaDa vinci zibola iitumato
ukufunyanwa kwamagqwirha ixesha lesithathu lokukhutshwa komhla
Izono ezisixhenxe ezibulalayo ze-Netflix yexesha le-2
ikarati yobugcisa bemfazwe